Fifidianana Sampana sy Komity FLM Orléans - 22 des. 2019 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
« … ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara … »
Komity FLM Orléans voafidy tamin’ny 2015
Isaorantsika Jesosy tamin’ny fitantanany ny Fiangonana tao anatin’izay fe-potoam-piasana 2015-2019 izay. Izy no nitantana, na dia maro aza ireo tsy fahamendrehantsika, ireo ady am-panahy sy ireo asa natrehina.
Nitondra antsika tahaka ny Mpiandry tsara tokoa Jesosy ka mendrika atolotra azy ny saotra sy haja ary ny voninahitra.
Raha hiverenana kely ny lasa dia tao anatin’izany fe-potoam-piasàna izany no nahazoantsika Pastora Mpitondra Fitandremana Pastora RASETA, ka isaorantsika manokana. Nahazo fiofanana koa ny Komity. Tao koa no nijoroan’ireo Faribohitra efatra eto amin’ny FLM Orléans. Tao ny ezaka zava-maneno izay nandraisan’ny Fiangonana manontolo anjara. Tao ny ezaka alitara, izay rakitra mitohy nataon’ny kristiana hananantsika alitara masina manokana ho an’ny Fiangonana.
Tamin’iny fe-potoam-piasana iny no nanomezan’i Jesosy antsika ny Teny Fanevan’ny Fiangonana, « Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay » Jaona 3:36a.
Tsy adino ny fifindrana trano fivavahana avy any Fleury-les-Aubrais nankaty Orléans misy antsika ankehitriny.
Nahazo diakona sy mpiandry vaovao isika. Nitombo ireo mpandray ny fanasan’ny Tompo eto an-toerana. Nitombo arak’isa ny sampana.
Navitrika sy niray hina isika tamin’ny fandraisana ny isan-telovolan’ny Fileovana teto amin’ny Fitandremana ary namonjy ireo fivoriana isan’ambaratonga, araka ny hafatra napetrak’i Pastora RAMAROKOTO Herilala, Mpitondra Fitandremana Orléans teo aloha.
Mankasitraka sy misaotra ny fandaminana nataon’ny Mpitondra Fileovana ihany koa ka nahafahantsika nahazo ny famangian’i Pastora RANDRIAMALALA Edison nandritra ny fotoana maro noho ny fitiavany, izay nahavita be teto amin’ny Fiangonana. Ankehitriny dia mitohy izany amin’ny fanirahana an’i Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, ankasitrahantsika. Nandritra izay fotoana rehetra izay dia teo ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON Maurice, nitondra ny Fiangonana ka anolorana fisaorana feno.
Maro no lesoka sy tsy fahampiana teo amin’ny aim-panahy, fandaminana, fitondràna ary samy nahita sy niaina izany isika. Isan’izany ny tsy nahafahan’ny Komity niasa nandritra volana vitsivitsy. Misaotra an’i Jesosy anefa mihazona antsika amin’ny finoana azy. Marobe ireo asa mbola miandry.
Tonga indray ny fotoana ankehitriny, hifidy Komity isan-tsampana sy Komitin’ny Fiangonana isika ho an’ny fe-potoam-piasana manaraka 2019-2023, izay atao ny alahady 22 desambra 2019 ho avy izao.
Efa nisy ireo fanentanana isan-karazany natao teo amin’ny filazan-draharaha.
Indro ny amin’ny fizotry ny fifidianana, araka ny lamina napetraky ny Fileovana sy ny Synodam-paritany:
FANDAMINANA FIANGONANA FITANDREMANA FILEOVANA, napetraky ny mpitondra Fileovana Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond (anaty teboka folo):
Fifidianana FLM Orléans 2015
1. Manomboka eo amin’ny SAMPANA rehetra ny fifidianana.
2. Ny Sampana tsirairay avy dia tokony hanana ny lisitry ny mpikambana mba ho ara-dalàna ny fifidianana ary mifanaraka tsara amin’ny lisitry ny mpandray fanasan’ny Tompo, ireo no mahazo mifidy.
3. Hamarinin’ny Pastora (Fiangonana-Fitandremana-Fileovana) amin’ny fanaovany sonia ny tatitra (PV) rehetra vao manan-kery.
4. Hanaovana antso eo amin’ny filazan-draharaha ary harahina mail na sms ny datin’ny fifidianana rehetra.
5. Ny komity voafidy no mifidy ny biraony ary mifidy solotena roa miakatra eo amin’ny komity sampana amin’ny ambaratonga ambony. Mifidy an-tratra iray. Ny Filohan’ny sampana dia mambra avy hatrany eo amin’ny komity ambaratonga ambony.
6. Eo amin’ny fotoana ny isan-droavolana na fotoana hafa no manao ny fifidianana ny komity fitandremana sampana tsirairay, ary samy mifidy ny biraony sysolon-tena roaary an-tratra iray. Miakatra ho mambra avy hatrany ny filoha, miaraka amin’ireo izay voafidy ho mambra ny komity fileovana sampana.
7. Amin’ny isan-telovolana raisin’ny FLM Orléans, volana Janoary 2020 no hanaovanan’ny komitin’ny fileovana sampana tsirairay ny fifidianana, izay samy hifidy ny biraony sy izay ho solo-tena ary an-tratra hiakatra ho komity sampana Synoda.
Marihina fa ny filoha sampana izay voafidy, dia mambra avy hatrany ao amin’ny komity reniny. Marina isaky ny ambaratonga izany (Fiangonana-Fitandremana-Fileovana-Synoda).
8. Noho izany, dia tsy maintsy samy mahavita ny fifidiana NY SAMPANA REHETRA eo anivon’ny fiangonana, fitandremana ( fitandremana telo – Paris, Orléans, Limoges), mialoha ny isan-telovolana hatao eto Orléans ny volana JANOARY 2020 satria amin’io isan-telovolana io no hifidianan’ny komity fileovan’ny sampama tsirairay avy ny biraony sy ireo solotena ary an-tratra iray ho komity sampana SYNODA.
9. Ny komity vaovao voafidy eo anivon’ny sampana rehetra, dia tsy mbola mandray andraikitra raha tsy aorinan’ny volana aprily. Koa rehefa vita ny famindrana asa (passation), dia ny volana may vao mivory sy mandray ny asa ny komity vaovao.
10. Ny komity reniny isan’ambaratonga kosa, dia tsy maintsy vita daholo mialoha ny isan-telovolana volana May izay hatao any Limoges ny 9-10 may 2020.
TOROMARIKA napetraky ny Filoha SPFLME, Pastora Dr HABBERSTAD Rakotondrazaka (anaty teboka efatra):
Fifidianana FLM Orléans 2011
1. Fiangonana: araka ny fandaminana ao an-toerana ihany no mametra ny isan’ny komity. Mifidy ny komitiny aloha ny sampana ary ireo indray no mifidy ny birao. Ny filohan’ny sampana voafidy dia mambra avy hatrany ao amin’ny komity fiangonana. Ny Pastora no filoha, ny Katekista filoha lefitra faharoa, ny Loholona kosa no filoha lefitra voalohany. Mifidy ireo izay ho solotenany ho ao amin’ny komity fitandremana.
2. Fitandremana: ny fandaminana an-toerana ihany no mametra ny isan’ny mambra komity. Mambra avy hatrany ireo Pastora sy ireo Katekista. Ny filohan’ny sampana fitandremana dia mambra avy hatrany ao amin’ny komity. Mifidy ireo izay ho solotenany ho ao amin’ny komity fileovana.
3. Fileovana: ny fandaminana an-toerana no mametra ny isan’ny komity; kendrena araka izay azo hatao hitovy ny isan’ny mpiasa sy ny loholona mambra ny komity fileovana. Ny filohan’ny sampana fileovana dia mambra avy hatrany ao amin’ny komity. Mifidy ireo izay ho soloteneny ho ao amin’ny komity synodam-paritany.
Marihina eto fa ho tonga hanatrika sy hitarika ny fifidianana eo amin’ny komity fileovana ny Filohan’ny SPFLME; koa mangataka ny Fileovana rehetra mba handefa ny daty hanaovany ny fifidianana, hahazoany mandamina miaraka amin’ny isam-pileovana.
a) Ny olona azo fidiana ho komitin’ny FiFiL dia olona izay tena tia sy mahalala tsara ny asan’ny Fifohazana.
b) Ny olona azo fidiana ho Filohan’ny FiFiL dia olona efa niasa 10 taona amin’ny maha-Mpiandry.
5. FBL: ny KMSP nivory tao Paris ny 27 oktobra 2019, dia mbola manamafy ny fanapahan-kevitra efa noraisina fa ny vadin’ny Mpiasa no Filoha sampana FBL amin’ny isan’ambaratonga Fiangonana, Fitandremana, Fileovana, ary Synodam-paritany.
6. Ny sampana rehetra eto amin’ny SPFLME:
Tokony mahavita ny fifidianana hatreo amin’ny Fileovana:
– alohan’ny febroary 2020 ny FBL, satria hanao ny fifidianana FBL SPFLME ny 15/16 febroary 2020. Zaikakely FBL hatao ao amin’ny Fileovana Strasbourg.
– alohan’ny martsa 2020 ny FiFiL, satria hanao fifidianana FiFiL SPFLME ny 14/15 martsa 2020. Zaikakely FiFiL hatao ao amin’ny Fileovana Marseille
– alohan’ny aprily 2020 ny KTLM, satria hanao ny fifidianana KTLM SPFLME ny 17/18/19 aprily 2020. Zaikakely KTLM hatao ao amin’ny Fileovana Paris.
– alohan’ny aprily 2020 ny SaLoMa SPFLME, atao amin’ny zaikakely KTLM ao Paris ny 17/18/19 aprily 2020, hanaovany ny fifidianany.
Fiofanana Komity FLM Orléans
Ny fotoam-pivavahana hotarihin’ny Mpitondra Fileovana, Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond dia hanomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
Koa miantso sy manasa anao tompoko amin’ny fandraisan’andraikitra ho amin’izany fifidianana izany. Hamafisintsika ny fiombonam-bavaka hiatrehana izany fotoana izany ka ho Jesosy no hitarika antsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, satria IZY NO LOHAN’NY FIANGONANA.